लक्ष्मी बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्र असार २० बाट निष्कासन हुने, ब्याज कति ? Bizshala -
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र आउँदो असार २८ गतेबाट निष्कासन हुने भएको छ।
बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्रको कुल इकाइमध्ये १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी ८ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ।
सर्वासाधारणका लागि निष्कासन गरिने कुल ८ लाख इकाइमध्ये पनि ५ प्रतिशतले हुने ४० हजार इकाइ सामूहिक कोषहरुका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ७ लाख ६० हजार इकाइमा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्।
लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाइदेखि अधिकतममा १ लाख इकाइसम्म खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो ऋणपत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३१ गते र ढिलोमा साउन ११ गते बैंकिङ समयपछि गरिनेछ।
ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ।
१० वर्षे यो ऋणपत्रलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार १५ गते निष्कासन अनुमति दिएको थियो। यो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन्।